Sida loo helo marin xidid ee Htc Hero | Androidsis
SIDEE LOOGU HELI KARAA XIDHIIDHKA GEESKA HTC
antocara | | Xididka Android, Noticias, ROM, Tababarada
Hagaag, waxaan horey uheysanay buug aan helno helitaanka xididka terminalkeena qaaliga ah Halyeey Htc. Sida aan filaayo inaad taqaan, laakiin kuwa cusub waxaan u leeyahay, anigoo leh helitaanka xididka Waxaan leenahay marin maamule oo aan ku leenahay terminalkeena tanna waxaan ku heli karnaa qaybo ka mid ah softiweerka si aan u awoodno inaan wax uga beddelno, u rakibno qolal cusub, ku rakibno codsiyo u baahan helitaanka habka xididka, iyo faa'iidooyinka aan dhammaadka lahayn.
Sidoo kale kuu sheeg tan tan androidsis Annagu mas'uul kama nihin waxyeelada suurtagalka ah ee laga yaabo inay ku timaado garoonka, laakiin waxba ma dhici doonaan haddii si sax ah loo sameeyo.
Waxaan ubaahanahay inaan soo dejino labadan feylal ee recovery.img iyo superuser.zip. Faylashaas ka sokow waxaan u baahanahay inaan helno Android SDK la soo dejiyey oo laga furay salka kumbuyuutarkeena.
Tallaabooyinka la raacayo ka dib soo degsashada faylasha hore:
1.- Waa inaan daminnaa taleefanka oo aan shidnaa hab deg deg ah, taabo furaha fallaarta gadaal adigoon sii deynin riix furaha korontada waxaana soo bixi doona sawir la mid ah kan.
Tani waa hab deg deg ah.
2. - Waxaan kala furaynnaa labadii feylood ee horey loogu soo dejiyey gudaha galka qalabka ee ku dhex jira galka Sdk ee aan sidoo kale soo dejinay.
3. - Ku xir telefoonka kombiyuutarka adoo isticmaalaya fiilada USB
4.- Waxaan ka fulinaa amarrada soo socda qunsulka ama terminaalka:
bootboot boot cm-geesi-recovery.img
Telefoonka ayaa dib u bilaabi doona oo geli doona habka soo kabashada iyadoo xulashooyin dhowr ah shaashadda laga helayo.
5.- Nooca amarradan soo socda mar labaad ka soo qor qeybta hoose ama windows console-ka:
adb shell Mount / nidaamka
adb riix su / system / bin /
adb riix Superuser.apk / system / app /
Telefoonku wuu dib u bilaabi doonaa oo waad yeelan doontaa helitaanka xididka kuweena Halyeey Htc.
Buug-gacmeedkan ayaa ururiya macluumaadka lagu bixiyo golaha xda-horumarinta halkanna waxaan uga mahadcelin karnaa dhammaan mudanayaashan fududeeya adeegsiga taleefannadeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Xididka Android » SIDEE LOOGU HELI KARAA XIDHIIDHKA GEESKA HTC
49 faallooyin, ka tag taada
wax walba way hagaagsan yihiin illaa aan ka kiciyo habka qafaalashada maadaama aysan ii oggolaan doonin inaan kor u fuulo / nidaamka adb
Ku jawaab kenobyte
Ma aqaan inaad ku rakibtay wadayaasha gaariga. Waxay la timaaddaa Android SDK.
Waxaan horeyba uheystey darawalkii oo dib loo rakibey laakiin waxba.
Sidoo kale waan ka fikiray laakiin midkoodna ma haysto nooc wanaagsan oo darawalka ah ama adeegga ADB ma rakibayo
Markaad furto konsol-ka, xagee adb ka wadaa?
xaggee ka yaal adb.exe => c: \_ sdk \_ qalabka \_
Mar hore ayaan kaaga mahadcelinayaa xiisaha. waxaan rajeynayaa inaan xitaa heli doono ^ _ ^
hadaad aaladaha adb gasho maxaa shaashada ka muuqda?
Ma haysto hortayda laakiin waan xasuustaa taas.
hadaan ordo aaladaha adb waxba ma soo baxaan. adb waxay i siisaa xulashooyinka amarka laakiin markii aan hubinayo adeegyada [qalabka adb] waxba kama sheegayo oo mar labaad ayay tusaysaa jawaabta.
fastbootka haddii aad si sax ah u fulisay?
Haa. oo waxay ku rarantahay sawirka qafaalashada maxaa yeelay waxay dib u bilaabaysaa oo i tusaysaa liiska xulashooyinka
Markaan ka sameeyo kombuyuutar kale ayaan awooday inaan sameeyo markii ugu horreysay dhib la'aan.
iyo wixii ku saabsan markaan helay markii aan sameeyay aaladaha adb => Liistada qalabka ku lifaaqan lifaaqyada… maran…. oo degdeg ah [haddii ay dhacdo inay u adeegto qof mustaqbalka, in madhan ay ka dhigantahay ma jiraan adeegyo firfircoon].
Aad iyo aad baad ugu mahadsantahay wax walbana waan kugu dhiirigelinayaa !!! kaligaa ma tihid u sii wad shaqada si la mid ah in kastoo mararka qaarkood aysan kula mid ahayn, laakiin waxaad tahay war weyn iyo adeeg caawimaad ah 😉
Waad salaaman tahay Kenobyte. Waad ku mahadsantahay kalsoonida. Runta waxa ay tahay mararka qaar ma aqaano in aan qof wax u qorayo iyo in kale, ama aan khalad u sameynayo.
Waxaan fiirinayay wixii shalay kugu dhacay si aad uhesho wax aan ku xaliyo, waxaan moodayay inay darawalada yihiin, laakiin ma aanan hubin sababta aanan uheyn Geesiga, aan aragno hadii htc ii soo diri doono taleefan si aan u cadeeyo ( weydiinta) in lacagtu i siinin Waxay siineysaa wax badan, laakiin waa inay shaqeysaa maxaa yeelay waxaan aqriyay isticmaaleyaal badan oo ka tirsan websaydhada kale inay shaqeeyaan.
Haatan waa inaan sugnaa inay iyagu sii daayaan qaar ka mid ah romerka wax laga beddelay ee Geesiga.
hello Er1k. Oggolaansho ka timid Androidsis waxaan faallo ka bixiyaa:
Tallaabooyinka waa kuwan oo keliya? taasi waa, haddii aan si adag u raaco waxa halkan ku qoran, miyaan helayaa xidid? mise waxaa jira tillaabooyin dhexdhexaad ah oo si fudud loogu qaado celcelis ahaan isticmaale?] haddii kuwani ay yihiin tallaabooyinka loo baahan yahay si loo siiyo marin xidid ah. looma baahna mar dambe.
[Arrinta wadayaasha waa tallaabo aan la qorin maxaa yeelay waxaa nalooga baahan yahay inaan ogaanno sida loo sameeyo? Mise waa la sii hirgaliyay markii aad furayso SDK xididka?] Sdk ee aad kufurayso xididka waxaa kujira galka la yiraahdo "usb_driver" kaas oo ah midka ay tahay inaad iska hubiso si aad uhesho darawalada "qalabka cusub ee qalabka lagu ogaado". waxaad haysataa laba fayl «x86» haddii kombiyuutarkaagu leeyahay 32 Bit processor iyo «amd64» haddii ay tahay 64 Bit [+ info :. Koorsada waxay ku weydiin doontaa darawallada 2 jeer [1 aqoonsiga qalabka iyo 2 ADB].
Sida aad kor ka aqrisan karto, cilad ku timid rakibaadda darawalada, aniga ima aysan shaqeyn oo markii aan badalay kombuyuutarrada ayaa markii ugu horreysay ii shaqeysay.
Wax kale: halyeeygeyga waxaan ku kiciyey isticmaalaha asalka leh rukhsadyadiisa oo dhan laakiin markaan u baahdo ma helo daaqadda xaqiijinta ficilka. Waxaan u aaneeyaa xaqiiqda ah in kumbuyuutarka aan xidid u dhigay geesiga uu jiro SDK oo leh faylasha loo baahan yahay si loo xidido loona kiciyo sixirka oo ay la socdaan kuwa aan ka tuuray geesiga. Waxaan sugayaa inaan xidido markale usbuucaan si aan u xaliyo laakiin hadii wax la mid ah ay kugu dhacaan adiga ama aad wax su'aalo ah qabtid, halkan ka faallo oo waxaan isku dayi doonaa inaan si wadajir ah u xallino.
Kenobyte sifiican looma sharixi karin. Waad ku mahadsantahay kaalmadaada.
Waad salaaman tahay, waxaan baranayaa cilmiga kumbuyuutarka waxaanan siiyay qoraallo iyo amarro ku saabsan linka, laakiin waxaan ahay qof ku cusub maadada.
Su’aashu waxay tahay:
Tallaabooyinka waa kuwan oo keliya? taasi waa, haddii aan si adag u raaco waxa halkan ku qoran, miyaan helayaa xidid? mise waxaa jira tillaabooyin dhexdhexaad ah oo loo qaado si loogu talagalay celcelis ahaan isticmaale?
Tusaale ahaan: arrinta darawallada waa tallaabo aan la qorin maxaa yeelay waxaa nalooga baahan yahay inaan ogaanno sida loo sameeyo? mise horay ayaaba loo dhaqan galiyay markaad furayso SDK xididka?
Waad ku mahadsantahay caawimaadda, ka dib!
Waad aragtay .. geesiga ayaa ii imanaya usbuuca dambe waxaanan ka fikirayaa inaan rogrogo, maxaa yeelay noqoshada wax cakiran waxay iga cabsi qabtaa inay wax xun ku dhacaan, laakiin caawimaaddaada ayaa laga yaabaa inaan isku tuuro barkadda 🙂
Sikastaba waxaan isku dayayaa inaan rakibo SDK-ga oo aad arki karto inuusan kaliya ka fureynin xididka, laakiin waa inaan kala soo baxaa barnaamij la yiraahdo eclipse oo aan raaco talaabooyin yar si haddii aan si tartiib tartiib ah aan u rogrogi karo.
Kaliya waa inaad furtid. Eclypse waa jawi horumarineed oo JAva ah, oo aad u baahan tahay oo keliya haddii aad u socoto barnaamij ku saabsan Android.
kor! Waxay ila tahay aniga in qorrax madoobaadka uu yahay barnaamijka android, xoogaa waan qasanaa, sax? : S
Waxaan u aaday inaan soo dejiyo superuser.zip mana ii oggolaan doonto, waxay leedahay ma lihi mudnaan.
Qof kale ma sudhan karaa meel kale?
Taasi waa sababta oo ah inaadan ka diiwaan gashanayn bogga xdadevelopers. Tag bogga aad diiwaangeliso way kuu oggolaan doontaa inaad soo dejiso.
Haddaan xididdeeyo, ma ku diri karaa faylasha bluetoth?
Afjarno terminal waxa ay samaynaysaa oo dhan waxay ku siinaysaa mudnaanta maamulka taleefanka. Laakiin kaliya xaqiiqda helitaanka xididka ama waxaad awoodi doontaa inaad ku dirto bluetooth. Waxaa jira codsi kuu oggolaanaya kaas oo loo yaqaan 'bluex'
Haddaba maxay yihiin mudnaanta maamulku?
Maxaan sameyn karaa oo aanan sameyn karin xidid la'aan?
Mudnaanta gaarka ahi waxay u oggolaaneysaa codsiyada qaarkood inay galaan qaybo ka mid ah nidaamka oo ay dhici karto inayna si kale u awoodin. Sidoo kale inaad xidid tahay waxaad u beddeli kartaa romanka terminalka oo waxaad beddeli kartaa mawduucyada muuqaalka ah.
laba jibbaarid dijo
Waad salaaman tahay, waxaan ahay qof cusub oo cusub, waxa ugu horeeya ee aan kuugu hambalyeeyo shaqada aad qabato, si fiicanna waxaan u qabaa shaki badan. Waxaan leeyahay geesiga htc waana jeclaan lahaa xididka laakiin ma aqaano sida loo fuliyo amarrada qunsulka, hubaal su'aashaydu way fududahay in laga jawaabo laakiin waan baaray dhamaan boggaga waxbana kama helin, horay ayaan u mahadceliyaa oo fiiriyaa haddii qof wuxuu i siiyaa fiilo.
Ka jawaab doblevertiente
Hagaag, waa inaad ku rakibtaa kumbuyuutarrada geesiyaasha ah ee kumbuyuutarka kombuyuutarkaaga, ku xir kumbuyuutarka adoo adeegsanaya USB-ga oo haddii aad leedahay daaqadaha riix bilowga iyo ikhtiyaarka aad ku ordi karto, nooca cmd iyo shaashad madow ayaa furmi doona, waxaa jira meesha aad ku qorto amarrada. Waa inaad soo degsataa sdk-ka android
Aad baad ugu mahadsantahay antocara sida dhaqsida leh ee aad uga jawaabtay, waxaan isku dayi doonaa berri waana kuu sheegi doonaa
Waad salaaman tahay, waan ka xumahay, laakiin aad ayaan ugu cusbahay android iyo guud ahaan, waxaan isku dayay waxaad ii sheegtay, sdk ma haysan, laakiin wali ma bilaabmayo.Barnaamijka fulintiisa gudaha ama dibedda ah ama feyl dufcadeed, kaas oo aan qalad samee Waxaan u maleynayaa in aanan si fiican u rakibneyn wadayaasha gawaarida ka xumahay dhibaatada
Waxaan ilaaway inaan haysto windows vista Uma maleynayo inay dhibaatadu tahay maya
Waad salaaman tihiin. Waxay iga caawiyeen arrinta xididka geesiga htc, laakiin wali ma aanan helin. Wax qaldan ayaan sameeyaa. Waxaan eegay fagaarayaasha kale waxaanan arkay inaan tabayo talaabooyin sida adb_win iyo fastboot. Qof ma iga caawin karaa si faahfaahsan sida loo sameeyo? mahadsanid horay iyo samir fadlan, waxaan ahay cusub.
Aniga ayey igu dhacdaa sida kenobyte shaashadda uma soo baxdo si loo bixiyo "had iyo jeer" marka ma garanayo waxa ay noqon karto ..
Waad salaaman tihiin, qof ma ii soo diri karaa feylka superuser.zip, kuma soo dejisan karo emaylkeyga parco_311@msn.com muchas gracias
Ku jawaab oscarcamp
oscarcamp => iska diiwaangeli madashaas oo bilaash ah, kuuma soo diraan spam oo goor dhow ama goor dambe ayaad markale u geli doontaa wax kale oo hubaal ah.
Ma jiraa qof garanaya sida loo xidido dadka u cusbooneysiiyay nooca ugu dambeeyay ee liinta?
Haddii aysan adiga kuu shaqeyneynin, iskuday sameynta "kaararka dahabka"
Waxaan rajaynayaa inaan dhawaan tilmaan ka dhigan karo tan, laga yaabee inay jiraan kuwo badan oo naga mid ah oo si dhakhso leh u cusbooneysiiyey halyeeygeenna htc. marka xigta waxaan baran doonaa 😉
Ku jawaab sikgerar
sidii loo ballan qaaday:
Waxaan u maleynayaa in qaabkani yahay kuweenna haysta firmware 1.5, sax? Hadday sidaas tahay, waa inaad isticmaashaa SDK 1.5 (midka aad halkaas ku tilmaantay), sax?
"Recovery.img" ayaa hoos u dhacay, markale ma soo gudbin kartaa?
habkani waa mid loogu talagalay qof walba hadda, maadaama laga bilaabo maanta 2.1 uusan (si rasmi ah) ugu soo bixin geesiga.
Marka laga hadlayo soo-kabashada, waxaad ka raadin kartaa dib-u-soo-kabashada amon-ra ee geesiga htc, halkan waxaa ku yaal xiriiriye nooca ugu dambeeyay ee xda forumyada, 1.6.2:
kama caban doontid xawaaraha jawaabta huh?
Mahadsanid sik_gerar !! Runta waxa ay tahay, shaki badan ayaan qabaa, wax badan ayaan ka aqriyaa wixii aan arko. Ujeeddadaydu waa inaan xidid u noqdo si aan u rakibo ROM-yada tusaale ahaan kuwa aan oranji ahayn, ma waxaan dhahayaa waa sax? Oo su’aal kale ayaa ah haddii aan xidid ku sameeyo anigoo adeegsanaya qaabkan, weligeed ma xididaysan doonaa? ama markasta oo aan rakibo roman cusub, ma inaad mar kale xidid siisaa?
By habka, firmware keebaa cusbooneysiinaya casriyaynta ugu dambeysay ee Orange / HTC ama HTC?
Salaan iyo mahadsanid,
Waxaan ku xasuusinayaa haddii aad haysatid qalabka ugu dambeeya ee oranjiga lagu dhejiyo, waa inaad raacdaa tilmaamaha uu adeegsado kaarka dahabka ah (wax ka beddel xogta qaar bilowga kaarka SD adoo ku daraya macluumaadka taleefankaaga si aad ugu shubto lambar aan saxeexnayn) qaabka "ka soo kicinta qabuuraha" psp ka .. ka raadi androidsis inaad aad u habeysantahay.
Xagga xididka, markaad xidid yeesho waxaad ku xididaysaa qalabkaas, waxayna kuu ogolaaneysaa inaad rakibto wax alla wixii aad rabto. Hadda, haddii aad rakibto qalab adag oo sidoo kale leh xidid, waad sii wadi doontaa inaad xidid yeelato, laakiin haddii aad rakibto qalab aan lahayn xidid (sida kuwa liinta rasmiga ah), waad lumineysaa.
soo gal bar kulanada modaco, aad ayaan ugu faraxsanahay qalabkaaga. Noockeedii ugu dambeeyay waa 3.2b5 lacag bixin (haddii aad bixiso € 10 waxay ku siinaysaa inaad marin u hesho beta-kii ugu dambeeyay had iyo jeer) oo ku shaqeeya nooca 1.5, ama 3.1 bilaash ah (midka aan ordo, oo aad u fiican). Haddii aad rabto 2.1 waa inaad soo dejisaa qaar kale (villainrom 3.3 waa midka ay dadka badankood u adeegsanayaan halyeeyga leh 2.1), laakiin waxaan doorbidaa inaan sugo nooca rasmiga ah ee geesiga leh 2.1 iyo in modaco ay wax ka beddeleyso, maxaa yeelay runtii waxay qabataa shaqo weyn, waa tan ugu isticmaalka badan maalinba maalinta ka dambaysa.
Waxaan dib isu qorayaa, fiiri labadan hanuun, waxaan ku helay anigoo ka raadinaya "xididka geesiga" mashiinka raadinta ee midigta sare ee boggan.
Hagaag, waad ku mahadsantahay inaad i xasuusiso tan iyo markii aan isku duubay inta udhaxeysa shirkadda 1.5 iyo lambarka cusbooneysiinta iyo wixii aan arko waxaan heystaa cusbooneysiinta ama isku-duwidda lambarka 2.73.61.5 ee oranji ah (mobiilku wuxuu yimid 3 toddobaad ka hor) ... sidaas ayey ku dhacday boostada soo socota https://www.androidsis.com/como-hacer-root-en-htc-hero-despues-de-actualizar/ oo waxaan ka bilaabayaa aqrinta hada 😉
Way ii cadaatay xididka iyo shirkadaha hadana waan ka faaiidaystaa oo waxaan fiirinayaa modaco. Mahadsanid sxb
salaan dhamaan ...
Waxaan isku dayayaa inaan xidid ku yeesho terminal geesi ah, laakiin macquul maahan inaad soo dejiso faylka recovery.img… .. waa la tirtiray…
Ma jiraa qof garanaya halka laga helo ..
Dabcan, fiiri, xiriirka soo socda waxaad ku leedahay golaha xda ee ku saabsan geesiga:
Halkan sida aad u arki karto waxay leeyihiin biin ku dhegan laan leh cinwaanka nooca ugu dambeeyay ee soo kabashada amon ra:
halkaasoo ay had iyo jeer ku leeyihiin noocii ugu dambeeyay iyo muraayadaha qaar ee soo dejinta.
Wanaagsan waxay i siiyeen halyeey htc ah markaan rabo inaan nuqul ka galiyo ajendaha inta lagu jiro duubista waxaan ku xirayaa taleefanka fiilada USB-ga mana aqoonsana, qof ayaa ii sheegi kara sida loo helo darawalada, ama sida aan u sameeyo
Waad salaaman tihiin, xiriiriyaha si aad u soo dejiso soo-kabashada ayaa dhimatay. Halkeen kala soo bixi karaa? faylka kale ee aan isleeyahay waa isku mid.
Mahadsanid salaan ..
Ku jawaab dldiegouru
Horaa loo cusboonaysiiyay
raadi laba faallood oo ka koreeya taada, adiguna jawaabta waad arki doontaa. ku dhowaad wax kasta oo aad ka heli karto waxay ku jiraan xda, taas oo aan ahayn, waxay ku leedahay barxaddeeda modaco.
Wax aan macquul aheyn, aad ayaad u mahadsantahay, horeyba waan u soo dejiyey wax walba, waxaan u maqanahay superuser.zip oo aanan garaneyn meel aan ka helo. Waad ku mahadsan tahay vibes wanaagsan 🙂. Isla marka aan helo faylkaas waxaan isku tuuri doonaa safarka Halyeeyga ka dibna waxaan kuu sheegi doonaa waxa dhacay
mahadsanid antocara!. Si tartiib tartiib ah ayaan u dareerayaa arrinta, hadda waa inaan arko waxa dhacaya, tan iyo markii aan bilaabay amarka:
aaladaha adb ...
waxay ii sheegtaa: adb serverka waqtigiisuu dhacay. Dilka….
* daemon wuxuu bilaabay sucessfully *
Liiska qalabka ku lifaaqan
(oo waxba halkan kama muuqdaan)
Waxa aan hadda sameynayo waa cusbooneysiinta "Android SDK iyo AVD Manager", xilligan xaadirka ah waxay soo degsaneysaa feylasha qaar, laga yaabee inaysan taasi ahayn? Waxay noqon laheyd wadayaasha aan qiyaasayo. Waad ku mahadsantahay hadii qof ogyahay wax baasuuke ah ama ii sheego haddii aan ku socdo wadada saxda ah 🙂. Waxaan horeyba u aqriyay dhamaan qoraalada kale ee ka imanayay dadka ila mid ahaa laakiin wali ma aanan awoodin inaan helo geesiga dib u bilaabo si uu usoo galo soo kabashada.
Salaan iyo mahadsanid ..
Helitaanka xididka ee SIXIRKA SIXIRKA IYO SPL DIIWAANGELINTA